Madaxweynaha Somaliland Oo ku soo guryo noqday dalka kana hadlay socdaalkiisii | Somaliland.Org
November 28, 2011	Hargeysa(Somaliland.Org)- Madaxweynaha Somaliland Md. Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay ka dib markii uu socdaal qaatay muddo bil ku dhow uu dalalka Ingiriiska, Itoobiya Iyo Jabuuti.
Madaxweyne Siilaanyo iyo weftigiisii oo ka soo degay madaarka caalamiga ah ee Cigaal International Airport Hargeysa waxa madaarka ku soo dhaweeyay Madaxweyne Ku xigeenka Somaliland Md. C/Raxmaan Cabdilaahi Ismaaciil (Saylici), Shirgudoonka labada aqal ee Baarlamaanka (Wakiiladda iyo Guurtida), Wasiiro, Masuuliyiinta xisbiga KULMIYE,Duqa Caasimada ahna kusimaha Guddoomiyaha Gobolka Maroodi-jeex iyo Dadweyne kale.
Md. Axmed Maxamed Siilaanyo oo saxaafadda ugu waramayay Qolka nasashada ee madaarka Hargeysa ayaa ka warbixiyay socdaalkiisii oo iskugu jiray fasax iyo socdaal shaqo.
“Farxad weyn ayay ii tahay Aniga iyo weftiga ila socdaba inaanu ku soo laabano dalkii hooyo, waxaanu muddo bil ku dhow dhow aanu tagnay dalalka Itoobiya, Ingiriiska iyo Jabuuti oo aanu saaka ka nimid,dibadaasi aanu u baxnay may ahayn marti qaadyo, manay ahayn casuumado iyo shirar aanu ka qeyb galaynay waxaan ku tagay sifo shakhsi ah oo fasax ah. Wadamadaasi aanu soo marnay oo dhan waxaanu iska arkaynay madax iyo masuuliyiin.”
“Dalka Ingiriiska waxaanu iska aragnay qaar ka mid ah Wasiirradda iyo Baarlamaanka Ingiriiska. Waxa kale oo aanu Itoobiya kula kulanay Raysal Wasaare Males Zanawi,”ayuu yidhi Md. Madaxweyne Siilaanyo.
Madaxweynuhu wuxuu sheegay inuu dalka Jabuuti kula kulmay shalay madaxweynaha dalkaasi.
“Meeshii aanu tagnaba si aad iyo aad ah ayaa naloogu soo dhaweynayay, waxaana aanu mid walba kala hadlaynay danaha Somaliland,”ayuu yidhi Madaxweynaha Somaliland, waxaanu intaasi ku daray “Magac iyo qiimo weyn ayaa Somaliland u yaala dibada iyo meelihii aanu tagnay.”
Md. Axmed Siilaanyo waxa uu sheegay inay dalka Ingiriiska kula kulmeen Jaaliyada Somaliland ee wadankaasi ku dhaqan oo uu tilmaamay inay uga xog warameen xaalada guud ee dalka.
Madaxweynuhu waxa uu madaarka salaam sharaf kaga qaatay cutubyo ka tirsan Ciidammadda qaranka, waxa wadada wadnaha ee Madaarka illaa Maxtooyada tubnaa dad aan u badan oo u gacan haadinayay soona dhaweynayay Madaxweynaha.
Previous PostUrur siyaasadeed la magac baxay Jamhuuriga oo lagaga dhawaaqay HargeysaNext PostSawirada Madaxweynaha Somaliland Oo ku soo guryo noqday dalka	Blog